Global Voices teny Malagasy » Myanmar: Ny fetiben’ny Thingyan 2007 · Global Voices teny Malagasy » Print
Myanmar: Ny fetiben'ny Thingyan 2007
Voadika ny 22 Jolay 2018 4:33 GMT 1	 · Mpanoratra May Hnin Phyu Nandika (fr) i Claire Ulrich, Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
(Marihina fa tamin'ny 14 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny volana Aprily no volana tena mahafinaritra indrindra hatrany isan-taona ho an'ny Birmana, satria io no volana hankalazana ny Thingyan – ny fetiben'ny rano -. Io ihany koa no fiandohan'ny taona vaovao ao amin'ny alimanaka Birmana. Mankalaza ny Thingyan ireo Birmana manerantany miaraka amin'ny nahandro nentim-paharazana isan-karazany araka ny vanim-potoana, ny mozika, ary ny rano betsaka.
Mankalaza ny Thingyan araka ny fombany tsirairay ireo bilaogera ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ao Myanmar . Bilaogy iombonana natokana ho an'ny Thingyan ho an'ny taona 2007 ny Myanmar Mahar Thingyan 2007 , izay natsangan'ny Service+, ary nampiditra mpandray anjara maro, sy nandefa sary tamin'ny aterineto, ary ny vaovao farany momba ny Thingyan ihany koa sy ireo fialamboly.
Sarin'ny pejy Flickr flappingwing 
Vanim-potoana ho an'ny fanaovana asa soa araka ny fomba nentim-paharazana ny Thingyan, hanadiovana ny taona lasa, ary hanombohana ny pejy vaovao amin'ny taona vaovao. Raha mbola mikorana ao amin'ny Manduts ny tanora, ireo zokinjokiny kosa mandinika, manao asa soa, ary mampihatra ny fampianarana bodista any amin'ny monasitera sy ny pagôda. Ao anatin'izany, namoaka lahatsoratra momba ny asa soa isankarazany amin'ny Thingyan  izay nandraisan'ny namana iray anjara ny bilaogera Ma Gyi.
Mitondra traikefa sy fahatsiarovana samihafa amin'ny olona samihafa ny Thingyan. Nanazava ny zavatra nahafinaritra azy indrindra tao amin'ny fety Thingyan i Y & G .
Elle nous rend propre et pur pour la nouvelle année. Le jour du Nouvel An, les gens font des actes méritoires. Ils libèrent beaucoup d’animaux, comme des poissons, des vaches et des chèvres. C’est ma fête traditionnelle préférée.
Mahatonga antsika ho madio sy mangatsakatsaka izy ho an'ny taom-baovao. Amin'ny Taom-baovao, manao asa mendri-piderana ny olona. Mamotsotra biby maro izy ireo, toy ny trondro, ombivavy sy osy. Ity no fety nentim-paharazana tiako indrindra.
Mandritra izany, niresaka momba ireo fiovana izay nanana fiantraikany tamin'ny fomban'ny Thingyan nentim-paharazana sy ny fomba ankalazan'ny tanora izany amin'izao fotoana izao i KSN COMPUTER CENTRE(MDY) .
Maintenant, le jour de Thingyan est devenu mauvais à cause des bagarres, des beuveries, des accidents et des manières de s’habiller inacceptables, comme porter des robes très fines, très courtes, sexy. Les vrais rites de Myanmar, aller à la pagode, au monastère, présenter ses respects aux personnes âgées, disparaissent de plus en plus en plus …
Ankehitriny, nanjary ratsy ny andron'i Thingyan noho ny adiady, ny fisotroana, ny lozam-pifamoivoizana ary ny fomba fiakanjo tsy mendrika, toy ny fanaovana akanjo tena manify, tena fohy, manaitaitra. Miha-manjavona hatrany hatrany ny tena fomba fanao eto Myanmar, dia ny mandeha any amin'ny pagoda, mankany amin'ny monastera, ary maneho fanajana ny zokiolona.
Nanazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny fomba fanao Thingyan any an-tanàndehibe, any ambanivohitra, sy ny Thingyan ho an'ireo mpitady ravinahitra any amin'ny firenena any ivelany i Kalosayhtoo , ary niresaka momba ny fotoana tena tiany indrindra mandritra ny fety.
Antso ho an'ny Birmana ao Singapaoro hankalaza ny Thingyan
Manome tombontsoa betsaka ho an'ny mpivarotra ihany koa ny Thingyan, satria mandeha miantsena ny olona rehetra hividy akanjo mety tsara amin'ny rano, lamba, lamaody samihafa, manofa fiara, miampy ny fividianana rehetra ilaina mba hanomanana ny sakafo nentim-paharazana amin'ny Thingyan. Iray amin'ireo mpivarotra ireo ilay bilaogera Barnyarbarnyar, izay nampiroborobo tao amin'ny bilaoginy ny hevitra mba hivarotana ny kiendiendy masikita . Hevitra iray, hoy izy, izay mety ahazoana vola sady mankalaza ihany ny Thingyan ao amin'ny fivarotany.
Mozika, dihy, ary filatroana no fitaovana manan-danja amin'ny fetiben'ny Thingyan any Myanmar. Ny akademian'ny dihy samihafa no nandray anjara tamin'ny fankalazana sy nandray anjara tamin'ny fifaninanana dihy nentim-paharazana izay fanao isan-taona. Isan-taona dia misy hira maro noforonina amin'ny Thingyan, ary maro ireo hira klasika teo aloha no haverina indray. Betsaka ny asa sy ny ezaka napetraka tamin'ny fanomanana ity fetibe ity, nanerana ny firenena. Bilaogera maro any Myanmar no nandefa hira nentim-paharazana an-tserasera sy ny sarin'ireo korana. Ao anatin'izany, ilay bilaogera Maydar-wii izay nandefa tamin'ny aterineto ny solfàn'ny gitara  ho an'ny hira tiany amin'ny Thingyan, ary naka ny sarin'ny famerenana dihy  amin'ny Thingyan tao Mandalay i aclmdy.
Raha mbola ao anatin'ny fialantsasatra lava nandritra ny folo andro tamin'ny taona 2007 ireo bilaogera maro noho ny fetibe Thingyan, dia mbola nanohy nanoratra momba ny fankalazan'izy ireo ny fetibe izy ireo. Ireo no fialantsasatra lava indrindra amin'ny Thingyan izay mbola tsy fahita ao Myanmar, ary inoana tokoa fa ho sarotra hohadinoina.
Miarahaba tratry ny fety Thingyan ary mirary taona vaovao feno fanambinana ho an'ny Birmana rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/22/123240/
 Myanmar Mahar Thingyan 2007: http://thin-gyan.blogspot.com/
 pejy Flickr flappingwing: http://www.flickr.com/photos/flappingwings/10828872/
 asa soa isankarazany amin'ny Thingyan: http://thin-gyan.blogspot.com/2007/04/9407-10-4-07.html
 Y & G: http://thin-gyan.blogspot.com/2007/04/water-festival_3297.html
 KSN COMPUTER CENTRE(MDY): http://thin-gyan.blogspot.com/2007/04/thingyan-must-be-purified.html
 hivarotana ny kiendiendy masikita: http://barnyarbarnyar.blogspot.com/2007/04/blog-post_12.html
 solfàn'ny gitara: http://maydar-wii.blogspot.com/2007/04/blog-post_11.html
 sarin'ny famerenana dihy: http://aclmdy.blogspot.com/2007/04/pre-waterfestival.html